Uummata Dhibeerraa Baraaruurra; Duula Filannoo Paartii Badhaadhinaa - Independent Oromia
Rasaasa RIX’n itti dhukaafame afuriin rukutamuu Dargaggoo Oromoo tokkoo
Uummata dhibee daddarbaarraa baraaruuf hojii hojjetamurra; duulli nu-filadhaa Dabballoota Paartii Badhaadhinaan oofamu caalee jiraachuu
Neetorkiin gad-dhiifame jedhame, bakkeewwan ammaan dura irraa muramee ture mara kan hin haammanne; qulqullinas kan hin qabne ta'uu
Guyyaa har’aa (Bitootessa 31, 2020) Ona Mana-Sibuu, Magaalaa Mandii keessatti, dhukaasa RIX'n itti dhukaafameen, rasaasa afuriin rukutamuun miidhaan qaamaa cimaan kan irra ga’e, Dargaggoon – Solomoon Taaddasaa Lataa – yeroo ammaatti Hospitaala Magaalaa Mandiitti wal'aanamaa jiraachuu, odeessa bilbilaan arganneen dhugeeffachuun danda'amee jira.
Rukutamuu dargaggoo kanaa boodas, Loltoonni Mootummaa Xoophiyaa, Oromoota dargaggoo kana lafaa kaasuuf dirmatan irratti dhukaasa banuun, Magaalattii goolaa kan oolan ta'uu, Qeerroon Magaalaa Mandii irraa bilbilaan odeeffanne tokko, haala walii-galaa bakkas ture RSWO'f ibsee jira.
Tweet Follow @Independ_Oromia
Dhimma Sardaa – Lammii Dhibee Daddarbaarraa Baraaruuf Hojjechuurra; Duula Na-filadhaa Paartii Badhaadhinaa Finiinsuu – Dabballoota MKIX.
Akka guutuu addunyaatti, weerara dhibee Coronavirus iggituuf tattaafilee godhamaa jiran keessatti, ija tarkaanfilee hatattamaa aangawootni biyoota ardii keenyaa danuun lammiilee isaanii baraaruuf fudhachaa jiraniitiin yogguu ilaalamu, gama Mootummaa Xoophiyaatiin harkifannaafi maal-na-dhibdeen guddaan kan ture ta'uun ni beekama. Gaaffiifi komii Oromoota quunnamtii neetiworkiin ala taasifamanii turaniitti dabalataan, qaamota garaagaraatiinis dhiibbaan taasifamaa turuunis ifa -galeessa.
Komiifi waamicha hedduu booda, tibbana, Mootummaan Xoophiyaa labsii lagannaa walitti-qabama uummataa kan lallabee jira. Ta'ullee, hojiirra oolmaan labsa kanaa, bifa biraa qabaachuu akka hin hafne, ciicatootni hedduun dhugoomaa jiru.
Akka waliigalaatti, walitti-qabamni uummataa dhorkaa ta'uun haa labsamuyyuu malee, aangawoonniifi dabballoonni mootummichaa, tibbana Konyaalee Lixaafi Kibba Oromiyaatti bobba'uun, waltajjiilee qopheessuun uummata walitti qabanii, Paartii Badhaadhinaa filadhaa jechuun duula nu-filadhaa finiinsaa jiraachuu isaaniitu mul'achaa jira. Komiin hawaasaas dhaga'amaa jira.
Tibba weerarri dhibee daddarbaa Coronavirus addunyaa yaachisaa jirutti; yeroo bulchitootni biyyootaa lammiilee isaanii tiksuuf kufanii ka'anitti; biyyoota dhibeen kun seene keessatti, uummanni akka bakka wal-gayii irraa of-qusatuufi qulqullina eeggatu yagguu barsiifamaafi taasifamaa jiru kanatti; Dabballoonni Mootummaa Koloneeffataa Xoophiyaa, akkaataa ittiin lammiilee baraaran mannaaguu mannaa, jiruu uummataarra jaalala aangoo ofii caalchifachuun, inumaa, gocha tatamsa'insa dhibee kanaatiif haala mijeessuu danda'u gochuuf (uummata walitti qabanii waltajjii teessisuuf), eeyyama ittiin fayyaa uummataa gaaga'an qaama kamtu kenneefi? Haamileehoo eessaa argatani? Labsii labsamehoo isaan moo qaama biraatu labse?.. Tarii ...akka itti hiikkatanidha jedhanii, labsa akka abjuutti hiikkachuu isaaniitii laata?... Dhimma kana, Oromoon utuu yeroo qabuu, itti yaaduun dansa.
Gama biraatiin, guyyaa har'aammoo, neetorkiin bilbilaaf intarneetaa, baatilee afurii oliif, Konyaalee Lixa Oromiyaa irraa muramee ture [deebi'uun] dhaga'amee jira. Kunis, bakkeewwan ammaan dura irraa muramee ture mara kan hin haammanneefi kan qulqullina hin qabne ta'uu, Oromtichi Konyaa Qeellem irraa odeeffanne, RSWO'f ibsee jira.
Gama keenyaanis, gara bakkeewwan neetorkiin gad-dhiifameeraaf jedhaman lama-sadiitti yaalii bilbilaa taasifneen milkaa'uu dhabuun keenya, guutumatti gadhiifamuu dhabuu neetorkii mirkaneessuu kan malu yommuu ta'u, innumti gadhiifameyyuu qulqullina kan hin qabne ta'uusaatiif ammoo, sagaleen bilbilaa kan Oromticha Konyaa Qeellem irraa dubbisne (kan sadaffaa irra jiru) gurraaf ragaadha.
Tamsaasa keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu dandeessu.
Marii Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin, haala daddarbiinsaafi ittisaa Coronavirus ilaalchisuun
Dhibee Coronavirus irratti Hanqinni Odeeffannoo Jiraachuu
Marii Dr Daggafaa Abdiisaa waliin taasifame – Dhimma Covid-19